3 na 1 akpaka ike akụrụngwa nri NC servo mpịakọta feeder uncoiler leveler igwe igwe igwe kwụ ọtọ
Nkọwa:3 n'ime 1 Straightener Feeders,Coil Straightener & Uncoiler Systems,Reel onye na-enye nri, Ndị na-enye Servo na Straightener,Onye na - eri nri na - eri nri, Ngwunye mkpuchi
Home > Ngwaahịa > Nri Cost Straightener > Uncoiler Straightener Feeder
Pịa Nri na Ngwunye Ngwá Ọrụ ( 1 )
Kọlụm nri nri ( 1 )
Inye Nri na Ngwunye Aka ( 20 )
Kọlụm nri nri ( 6 )
Nhazi nri ( 15 )
Usoro Nri kọmpat ( 35 )
Mkpumkpu Nri siri ike Ngw’oru ( 24 )
Nri usoro ( 14 )
Ekpughere Nkọcha Na Ndọgbu ( 1 )
Onye na-enye Servo Roll ( 30 )
Onye na-enye ndị na-agba ọsọ dị elu ( 5 )
Ihe eji achọ mma ( 9 )
Ntinye akwụkwọ ntuziaka nke Motorized ( 2 )
Ugbo ala isi abuo ( 2 )
Ejiri igwe na-arụ ọrụ nke Hydraulic ( 4 )
Mgbasa Staming ( 19 )
C Frame High Speed ​​Press Machine ( 5 )
H Frame High Speed ​​Press Machine ( 6 )
Ike Mbido ( 8 )
Mpempe akwụkwọ Metal Metal Straightener ( 4 )
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ọkọlọtọ ( 1 )
Ndọ mpempe akwụkwọ nke Ndọ ( 2 )
S Loop High Speed ​​Straightener ( 1 )
Nri Cost Straightener ( 91 )
3 Na 1 Servo Feeders ( 23 )
Ahịrị nri ( 19 )
NC Servo Straightener na-enye nri ( 9 )
Ngwaahịa nke Uncoiler Straightener Feeder , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, 3 n'ime 1 Straightener Feeders , Coil Straightener & Uncoiler Systems suppliers / factory, wholesale high-quality products of Reel onye na-enye nri R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ikpughepu nri na-agbanwe agbanwe  Kpọtụrụ ugbu a
Coil ndepụta ahịrị maka stamping presses  Kpọtụrụ ugbu a
Nchịkọta Nchịkọta Core-Straightener Combos  Kpọtụrụ ugbu a
Nri Ngwaọrụ  Kpọtụrụ ugbu a
Stamping akụrụngwa Na - enye ndị na - enye nri nri  Kpọtụrụ ugbu a
Coil Straightener Feeder compacted Press For Stalping metal  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-enye Servo Coil Straightener  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-enye Servo Feedight Straightener Decoiler  Kpọtụrụ ugbu a
Line kọmpat 3 n’ime 1 (Uncoiler-Straightener-Feeder)  Kpọtụrụ ugbu a
Coil nri akara maka akpakanamde ụlọ ọrụ  Kpọtụrụ ugbu a
3 Na 1 Straightener-Feeder na Decoiler  Kpọtụrụ ugbu a
Atọ na otu Automatic Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Mpempe akwụkwọ Metal Straightener Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ọla  Kpọtụrụ ugbu a
3 n'ime 1 Servo Straightener Feeder na Uncoiler  Kpọtụrụ ugbu a
Press nri usoro NC leveler feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Uncoiler System Feeder Straightener  Kpọtụrụ ugbu a
Ikpughepu nri na-agbanwe agbanwe
UNCOI Ling hulite ego DING IHE Electric akụkụ Nke a bụ igwe nri nri, nwere igwe ihe ndozi, igwe na-enye nri na igwe nri. nke a na-akpọ feeder-straightener, nke a na-edozigharị ya ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere nke akụrụngwa nke ihe eji...
Coil ndepụta ahịrị maka stamping presses
CO M L M LARA LIN ES FO R STA MPING PRE SSES Nke a bụ igwe nri nri, nwere igwe ihe ndozi, igwe na-enye nri na igwe nri. nke a na-akpọ feeder-straightener, nke a na-edozigharị ya ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere nke akụrụngwa nke ihe eji...
Nchịkọta Nchịkọta Core-Straightener Combos
CO IL FEEDER-STRAIGHTENER COMBOS Nke a bụ igwe nri nri, nwere igwe ihe ndozi, igwe na-enye nri na igwe nri. nke a na-akpọ feeder-straightener, nke a na-edozigharị ya ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere nke akụrụngwa nke ihe eji agbatị. Usoro...
ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA D CO IL Nke a bụ igwe nri nri, nwere igwe ihe ndozi, igwe na-enye nri na igwe nri. nke a na-akpọ feeder-straightener, nke a na-edozigharị ya ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere nke akụrụngwa nke ihe eji agbatị....
Stamping akụrụngwa Na - enye ndị na - enye nri nri
AMB ER E EQUIP MENT PRES SER CO IL FEE DERS Nke a bụ igwe nri nri, nwere igwe ihe ndozi, igwe na-enye nri na igwe nri. nke a na-akpọ feeder-straightener, nke a na-edozigharị ya ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere nke akụrụngwa nke ihe eji...
Coil Straightener Feeder compacted Press For Stalping metal
CO IL STRAIGHTENER FEE DER DARA PRE SS MAKA STLỌ EGO Nke a bụ igwe nri nri, nwere igwe ihe ndozi, igwe na-enye nri na igwe nri. nke a na-akpọ feeder-straightener, nke a na-edozigharị ya ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere nke akụrụngwa nke ihe...
Onye na-enye Servo Coil Straightener
SERVO C OIL STRAIGH TENER FEEDER Nke a bụ igwe nri nri, nwere igwe ihe ndozi, igwe na-enye nri na igwe nri. nke a na-akpọ feeder-straightener, nke a na-edozigharị ya ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere nke akụrụngwa nke ihe eji agbatị. Usoro...
Onye na-enye Servo Feedight Straightener Decoiler
SERVO FEE DER STRAIGHTENER DE COILER Nke a bụ igwe nri nri, nwere igwe ihe ndozi, igwe na-enye nri na igwe nri. nke a na-akpọ feeder-straightener, nke a na-edozigharị ya ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere nke akụrụngwa nke ihe eji agbatị....
Line kọmpat 3 n’ime 1 (Uncoiler-Straightener-Feeder)
AKW LINKWỌ AH LIN E 3 NA 1 (UNCOIL ER-STRAIGHTENER-FEEDER) Nke a bụ igwe nri nri, nwere igwe ihe ndozi, igwe na-enye nri na igwe nri. nke a na-akpọ feeder-straightener, nke a na-edozigharị ya ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere nke akụrụngwa...
Coil nri akara maka akpakanamde ụlọ ọrụ
AKWEDKWỌ AKWKWỌ AKW COKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ AKW COKWỌ N'COLỌ NIILE Nke a bụ igwe nri nri, nwere igwe ihe ndozi, igwe na-enye nri na igwe nri. nke a na-akpọ feeder-straightener, nke a na-edozigharị ya ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere...
3 Na 1 Straightener-Feeder na Decoiler
3 NA 1 EGO HTENER-FEEDER W ITH DEC OILER Nke a bụ igwe nri nri, nwere igwe ihe ndozi, igwe na-enye nri na igwe nri. nke a na-akpọ feeder-straightener, nke a na-edozigharị ya ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere nke akụrụngwa nke ihe eji agbatị....
Atọ na otu Automatic Feeder
ATỌ IN O ne Akpaaka feeder Nke a bụ igwe nri nri, nwere igwe ihe ndozi, igwe na-enye nri na igwe nri. nke a na-akpọ feeder-straightener, nke a na-edozigharị ya ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere nke akụrụngwa nke ihe eji agbatị. Usoro nri zuru...
Mpempe akwụkwọ Metal Straightener Feeder
EGO KA EGO SI GWU PUTA GHTENER FEEDER Nke a bụ igwe nri nri, nwere igwe ihe ndozi, igwe na-enye nri na igwe nri. nke a na-akpọ feeder-straightener, nke a na-edozigharị ya ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere nke akụrụngwa nke ihe eji agbatị....
Ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ọla
MEYTAL CO IL FEEDER PR ESS LINE Ndị a na-ahụ maka ngwa ahịa igwe na-emepụta ihe dị n'ime oghere dị mkpụmkpụ iji mepụta mkpa ndị ahịa na-ezughi oke. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta...
3 n'ime 1 Servo Straightener Feeder na Uncoiler
3 N'ime 1 SERVO STR AIGHTENER FEE DER NA UNC OILER 3 n'ime 1 Servo Straightener Feeder na Uncoiler dị na mkpụmkpụ oghere imewe bụ nke emepụtara n'ụzọ pụrụ iche iji gboo mkpa ndị ahịa na-ezughi oke. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna...
Press nri usoro NC leveler feeder
PRESS F EED ING SYSTEM N C LEV ELER FEEDER Ndị na-ahụ maka nri pịa NC leveler na-ahụ maka oghere dị mkpụmkpụ ohere emere ka o wee gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba...
Uncoiler System Feeder Straightener
UNCOILER SYST EM FEEDER STRAIGHTENER Ihe mkpuchi Cove Servo Straightener dị na mkpụmkpụ oghere sara mbara ka etolitepụtara nke ọma iji gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba...
China Uncoiler Straightener Feeder Ngwa
Ndị na - ewepụta udiri uncoiler Straightener bụ Decoiler Straightener NC Servo Roll Feed for Coil Feed Line, yabụ nwee ike ịrụ ọrụ ọkpụrụkpụ site na 0.6 mm ruo 6.0mm na obosara nke dị na 70 ruo 1800mm na ịdị arọ ruo 20tons dabere na mkpa nke onye ahịa ahụ dị mkpa.Various enwere ike ịgwakọta ụdị ihe dị iche iche, site na ndị dị nro dịka aluminium na alloys, ruo ihe ndị na-ekpo ọkụ na oyi na-atụ na carbon na ọla nchara, yana ngwaọrụ ndị nwere ike dị elu na nchara.
Onye na-eweta Uncoiler Straightener, ya na Decoiler, ihe igwe na ihe nri na igwe nri n’otu ngwakọta. Ọ na-ekpughepu ihe mpempe ígwè site na ngwaahịa mkpuchi, na-emezi ya ka ọ dị larịị ma na-enye ya nri igwe na - ejide ya. Ekele ya na anụ ahụ dị mma na usoro ihe eji arụ ọrụ dị elu, ọ nwere ike ijikwa ngwaahịa mkpuchi ngwa ngwa ruo 20tons.
Na YASKAWA servo moto na draịva na MITSUBISHI PLC, nri nwere ike nweta oke nri ± 0.15mm. Ọzọkwa, usoro nri gị dum pere mpe bụ naanị 4.5m, nke ga - echekwa ọtụtụ ebe ọrụ maka akwụkwọ mgbasa ozi gị.
Uncoiler Straightener feeder adabara akpakanamde ụlọ ọrụ, ụlọ ngwa oru ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, na kọmputa na-electronic components ụlọ ọrụ, ngwaike na metal zọ ụlọ ọrụ na wdg Parts ka Structural ụgbọ ala akụkụ ahụ na n'akụkụ ndị ọzọ dị ka wipers, breeki pad, Kee Bar, Mia Okporo ígwè nke oche oche ụgbọ ala, windo eletriki, radiators, levers, pedals, oche na-akwado, akụkụ igbe, wiil, ihe na-akwado ụzọ, braces, clamps, eriri, mkpọchi na mkpọchi maka ọnụ ụzọ, akụkụ akụkụ kapịnta, nkwado ọla, parụl ndị rụrụ arụ, ụlọ moto, ọnụ ụzọ , trays, nduzi, okpu, nkwado, brackets, aka, housings, pan, brackets, ụkwụ, ogwe aka, bọtịnụ, diffusersa na wdg.
Igwe eji akporo ngwa ngwa na-eme eyelet
Ngwunye igwe eji eme akwa nke Hydraulic Coililing for line
Pịa nri Stamping Line
Aka oru igwe na igwe nri
Ndozi Elu igwe NC Servo Roll Feedl Machine
3 n'ime 1 Straightener Feeders Coil Straightener & Uncoiler Systems Reel onye na-enye nri Ndị na-enye Servo na Straightener Onye na - eri nri na - eri nri Ngwunye mkpuchi 4 n'ime 1 Straightener Feeders 3 n'ime 1 Servo Straightener Feeder